War Dag-Dag ah: Isku Dhac Rasaas la isku Adeegsaday oo Saaka ka Dhacay Deegaanka Ceel-gerdi | Maalmahanews
War Dag-Dag ah: Isku Dhac Rasaas la isku Adeegsaday oo Saaka ka Dhacay Deegaanka Ceel-gerdi
Berbera-(Maalmaha News):- Wararka naga soo gaadhaya magaalada Berbera ayaa sheegaya in Saaka iska hor-imaad hubaysan oo la isku adeegsaday rasaas uu ka dhacay deegaanka Ceel-gardi oo dhinaca bari ka xigta magaalo xeebeeda berbera.
Inkastoo aan wali warar faah-faahsa laga haynin khasaaraha ka dhashay iyo siduu dagaalkan ku bilaabmay Hadana wararka hor dhaca ee shabakda Maalmaha news ay helayso ayaa sheegaya in k9ox dablay oo ka cadhaysan dakad halkaasi laga samaynayaa ay saaka weerar ku ekaysiiyeen dablay kale oo hore ugu sii sugnay deegaanka ceel-gardi.
Sida laga war qabo waxa todobaadadii ugu danbeeyey ceel-gardi ka socday dhismaha dakad macmal ah oo la sheegay inay dhisanayaan dadka deegaankaasi, iyadoo la dareensanaa guuxa muran ee ka taagan deegaankaasi.
Ma jiraan warar madax banaan oo dhacdadan ka warmaya hasayeeshee nin deegaanka ku sugan oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa noo xaqiijiyey jiritaanka dagaalkan, wuxuu intaas ku daray in baabuur iyo Cagafyo la kala qaaday.
wixii warar ah ee dheeraad ah kala soco maalmaga news.